10ka codsi ee ugufiican ee lagu aqriyo buugaagta kujira Android | Androidsis
10-ka barnaamij ee ugufiican ee lagu akhristo buugaagta kujira Android
Ignacio Sala | 25/05/2021 18:00 | Codsiyada Android
Hadaan rabno ubadkeena caadaystay inay caado ka dhigtaan wax aqrinta sida leexasho oo aan ahayn waajibaad maadaama ay yaryihiin, xaaladaha badankood, waa inaan ku tiirsanaano tikniyoolajiyadda, maadaama ay u oggolaanayso iyaga inay ka dhigaan hawshan mid xammillan oo ka caawin doonta iyaga maalinba maalinta ka dambaysa.
Qof kastaa kuma haysto kiniin guriga dhexdiisa, markaa isticmaalka aaladdan ikhtiyaar uma aha guryaha intooda badan. Nasiib wanaagse, taleefan casri ah iyo codsi lagu akhriyo buugaagta ayaa in ka badan intaas ku filan. Hadaad raadineyso barnaamijyada si loogu akhriyo buugaagta bilaashka ah Android, hoosta waxaan ku tusi doonaa waa 10ka ugu fiican ee laga heli karo Play Store.
Mid ka mid ah dhinacyada ay tahay inaan tixgelinno marka aan dooranayno dalabka ayaa ah la jaanqaadida buug kasta iyo nooc kasta oo kala duwan iyo qaabab buug maqal ah in aan ka heli karno internetka. Iswaafajinta weyn ee ay na siiso, had iyo jeer way fiicnaan doontaa tan iyo markii ay noo oggolaaneyso inaan adeegsanno hal cod oo aan ka duwaneyn nooca qaabka.
Qaar ka mid ah codsiyada aan hoos ku tusayno, waxaa ka mid ah taageerada in ka badan 20 nooc buugaagta, codsiyada, qaar ka mid ah, waxay u baahan yihiin lacag-bixin dheeri ah oo shaki la'aan mudan haddii aan si joogto ah uga akhrino buugaag ama nooc kasta oo dokumenti ah taleefannada casriga ah.
1 Buuga Google Play
3 FB Akhriste
4 Xad dhaaf
8 Dayax + Akhriste
9 Qiimaha eReader
Buuga Google Play
Haddii aadan rabin codsiyada dhinac saddexaad in lagu rakibo si aad u aqriso buugaagta aad jeceshahay ama ay u akhriyaan carruurtaadu, waad isticmaali kartaa Google Play Books, barnaamijka Google asal ahaan loo rakibay dhammaan terminaallada Android ee gaadha suuqa.
Tani way kuu oggolaaneysaa isku xir dhammaan qoraalada inaad ku sameyso koontada Google Drive halkaas oo aad ku keydin karto dhammaan buugaagtaada. Intaas waxaa sii dheer, iyada oo loo marayo arjiga laftiisa waxaan marin u leenahay buugaagta oo ay ku jiraan malaayiin buugaag ah
Kala xulashada qaabeynta gudaheeda, arjiga ayaa noo oggolaanaya hagaaji dhalaalka iyo midabka asalka, Hawlaha ku habboon haddii aan rabno inaan wax aqrinno ka hor intaadan seexan oo aan awoodno inaan si fudud u seexanno. Ahaanshaha codsi Google ah, waxaa loo heli karaa soo degsasho bilaash ah.
Haddii aan ka hadalno buugaagta elektarooniga ah, waa inaan ka hadalnaa Amazon iyo codsiga Kindle. Kindle waa codsi Amazon ah oo loogu talagalay qalabka moobiilka oo aan ku awoodno akhri gabi ahaan qaab buug kasta elektiroonig ah oo soo gaadha gacmaheena, maahan oo kaliya kuwa aan ka iibsan karno ama ka soo dejisan karno barxadiisa.
Haddii lagu daro akhristaha elektaroonigga ah, waad la wadaagi kartaa buugaagta codsigan iyo aqrinta udhaxeysa qalabka. Codsiga Kindle waxaa loo heli karaa soo dejin gebi ahaanba bilaash waana mid ka mid ah xulashooyinka ugu wanaagsan ee hadda laga heli karo suuqa.
Mid kale oo ka mid ah codsiyada ugu dhameystiran ee aan ka heli karno Play Store si aan ugu akhrino buugaagta elektaroonigga ah qaab ahaan qaab kasta waa FB Reader, waa codsi furan oo furan taas oo waliba noo ogolaaneysa inaan calaamadeyno qoraalka oo aan ku darno qoraallo.
FB Reader wuxuu taageeraa qaabka ePub, FB2, PDF, RTF, Kindle AZW3, DOC, HTML iyo TEXT. Xulashada qaabeynta dhexdeeda, codsigu wuxuu noo oggolaanayaa inaan qaabeyno farta aan dooneyno inaan adeegsanno, wax ka beddelno asalka buugga iyo xitaa inaan dhaqaajino habka mugdiga ah ee ugu habboon markaan akhrinayno iftiinka jawiga hooseeya.
Codsigan ayaa loo heli karaa adiga soo dejiso gabi ahaanba bilaash oo waxaa ku jira xayeysiis laakiin ma jiro wax ku iibsiga barnaamijka si looga takhaluso. Sida Kindle oo kale, barnaamijkan waxaan kula jaanqaadi karnaa maktabaddeenna aalado kale iyada oo loo marayo Google Drive.
Developer: FBReader.ORG Xaddidan
Haddii aadan rabin inaad noloshaada ku adkaato inaad soo degsato oo aad buuggaaggaagiso nuqul qalabkaaga, xalka ay 'overDrive' na siiso waa waxa aad raadineyso. OverDrive waxay siineysaa qashinkeena helitaanka in ka badan 30.000 maktabado adduunka oo dhan laga heli karo 24 saacadood maalintii, 7 maalmood usbuucii.
Codsiga ayaa noo ogolaanaya waafajinta dhammaan waxyaabaha aan soo dejisanno iyo booska aan ka helno aalado kale. Si aad u adeegsato adeegan, waxaad u baahan tahay xisaab maktabad oo sax ah, nidaam aad u fudud oo kaliya qaadan doona booqasho fudud oo noo oggolaaneysa helitaanka akhriska buug kasta oo dhowaan suuqa ku yimid si sharci ah.
Aldico waxay na siisaa khibrad akhris oo gabi ahaanba la habeyn karo maadaama ay noo ogolaaneyso dooro cabbirka font, tirinta iyo midabada qoraalka marka lagu daro wax ka beddelka midabka asalka, farqiga, booska u dhexeeya khadadka, isku toosinta iyo dhalaalka shaashadda, iyo sidoo kale bixinta qaab mugdi ah.
Codsiga wuxuu la jaan qaadayaa qaababka ePub iyo PDF waana noo ogolaanayaa abaabulaan buugaag iyagoo adeegsanaya sumado iyo uruurinno. Waxaa ka mid ah mashiin raadin xoog leh, qaamuus iyo suurtagalnimada inaad ku darto kaydkaaga OPDS kuu gaarka ah. Waxay ku habboon tahay Android 4.0 iyo wixii ka dambeeya, waa lagu soo dejisan karaa bilaash, waxaa ku jira xayeysiis iyo iibsasho app ah.
Haddii aan isticmaalno wax ku iibsiga gudaha-app, waan awoodnaa hoosta ka xariiq oo qor faylasha ePub, ku dar widget shaashadda guriga ee casrigayaga oo gebi ahaanba ka saar xayeysiinta.
Developer: Laga soo bilaabo Marque
Eboox waa mid ka mid ah codsiyada bixiya qiimeynta ugu wanaagsan ee ka dhexjirta Dukaanka Play with a Celcelis ahaan qiimeynta 4.8 xiddigood 5ta suuragal ah in kabadan 130.000 dib u eegis. Codsigan wuxuu la jaan qaadayaa fb2, epub, moby iyo pdf qaabab iyo kuwa kale.
Codsiga waxaa loo heli karaa adiga ku soo dejiso bilaashKuma jiraan xayeysiinta laakiin haddii aad ka iibsato gudaha-app si aad ugu hesho dhammaan howlaha uu na siiyo barnaamijka. Waxay ka kooban tahay habayn habeen ah, is dhexgalka waa mid fudud oo si fudud loo isticmaali karo, wuxuu noo ogolaanayaa inaan ku shubno waxyaabaha ku jira arjiga shabakadda shabakadda, fayl kasta oo ka mid ah aaladda moobilkeena ama kaarka SD ee aaladdayada.
Nooca ugu yar ee Android ee looga baahan yahay soo dejinta iyo adeegsiga Eboox waa Android 4.1
eBoox: buugga akhriska buugga ee epub
Developer: AKHRISKA APPS
AllReader waa codsi gebi ahaanba bilaash ah oo noo oggolaanaya inaan ku akhrino feylal ahaan qaab kasta fb2, fb3, fbz, txt, epub (no DRM), html, doc, docx, odt, rtf, mobi (no DRM)… Mid ka mid ah waxyaabaha soo jiidashada leh ee codsigan ayaa ah inuu u baahan yahay Android 2.3, markaa waa mid ku habboon in loo isticmaalo aalado duug ah, in kastoo aanan awood u yeelan doonin inaan ka faa'iideysano dhammaan howlaha ay bixiso.
Xulashada qaabeynta dhexdeeda, ayaa noo oggolaaneysa wax ka beddel font iyo cabirka font labadaba, ku dar midabada iyo sawirada asalka ah, waxaa ku jira xaalad mugdi ah, waxaa ku jira taageerada OPDS ... Waxa ugu wanaagsan oo dhan, AlReader ayaa loo heli karaa soo dejisan gebi ahaanba bilaash ah, kuma jiraan xayeysiis ama wax ku iibsiga barnaamijka. AlReader wuxuu u baahan yahay Android 2.3 ama ka dib.
AlReader -waxbadan akhristaha buugaagta qoraalka
Dayax + Akhriste
Dayaxa + Akhristaha ayaa ku habboon qaababyada EPUB, PDF, DJVU, AZW3, MOBI, FB2, PRC, CHM, CBZ, CBR, UMD, DOCX, ODT, RTF, TXT, HTML, MD (MarkDown), WEBP, RAR, ZIP ama OPDS, markaa ma soconeyno in aan wax dhibaato ah la arkin markaad akhrinaysid nooc kasta oo buug ah iyadoon loo eegin qaabkiisa.
Fursadaha qaabeynta ayaa noo oggolaanaya wax ka beddel farqiga u dhexeeya khadadka, kordhiyo ama yareeyo cabbirka xarfaha, wax ka beddel midabka asalka, ku dar mowduucyo kala duwan oo maalin iyo habeen ah. Intaa waxaa sii dheer, waxay noo ogolaaneysaa inaan sameyno baaritaanno horumarsan, ku darno calaamado, ku beddelno xakamaynta dhalaalka hal taabasho, waxay noo oggolaaneysaa inaan ku darno sharraxaadyo, fiirinno macnaha ereyada ee qaamuuska ama tarjumaaddooda Isbaanishka ...
Dayaxa + Akhriste ayaa loo heli karaa adiga ku soo dejiso bilaash, waxaa ka mid ah xayeysiiska iyo iibsashada barnaamijka si looga saaro xayeysiinta loona helo dhammaan howlaha barnaamijkan cajiibka ah uu na siinayo. Waxaan sidoo kale si toos ah u iibsan karnaa arjiga oo aan lahayn xayeysiis iyo dhammaan shaqooyinka la furay.
Developer: Dayaxa +
eReader Prestigio wuxuu noo ogolaanayaa inaan buugaagta elektarooniga ah ku helno HTML, FB2, FB2.ZIP, TXT, PDF, epub, MOBI, epub3, djvu iyo xitaa buugaagta codka. Waxay na siisaa helitaanka maktabad leh in ka badan 50.000 buugaag iyo buugaag maqal ah. Waxaa ka mid ah habayn habeen ah, mawduucyo kala duwan si loo habeeyo is-dhexgalka, wax looga beddelo cabbirka iyo qaabka xarafka ...
Iyadoo loo marayo Google Drive iyo Dropbox waxaan isku waafajin karnaa labadaba waxyaabaha aan ku keydinay qalabkeena iyo aruurinta aan abuuri karno. Waxaa ku jira aalad shaashadda guriga iyo maareeyaha faylka oo naga caawin doona inaan si dhakhso leh ugu helno faylalka qaabka buugga ah ee aan nuqul ka qaadno aaladdayada.
Qiimaha eReader waxaa laga heli karaa soo degsasho bilaash ah, waxaa ka mid ah xayeysiisyada iyo iibsashada barnaamijka oo noo oggolaanaya inaan ka saarno xayeysiiska oo aan marin u helno dhammaan waxyaabaha ku jira barnaamijka. Wuxuu u baahan yahay Android 4.1 ama ka sareeya.
Qiimaha eReader: Akhriste
PocketBook maahan oo kaliya la jaan qaada ilaa 19 nooc oo buug ah (EPUB, FB2, PDF, MOBI, PDF, DJVU, DOCX, RTF, TXT, HTML iyo kuwa kale) laakiin sidoo kale, waxay sidoo kale la jaan qaadi kartaa qaabka CBR iyo CBZ (comics). Waxay kaloo taageertaa buugaagta maqalka waxayna buugaagta u rogtaa qaab maqal iyada oo ay ugu wacan tahay mashiinka TTS (Text to Speech).
Codsigan ayaa noo oggolaanaya isku xir dhammaan waxyaabaha ku jira Google Drive iyo Dropbox, waxay la jaan qaadi kartaa buugaagta ODPS sidaa darteed waxaan heli karnaa maktabadaha amaahda buugaagta. Nidaamka codsiga gudahiisa, PocketBook wuxuu noo ogolaanayaa inaan wax ka bedelno booska badhamada, wax ka badalno cabirka iyo farta, waxaa ku jira qalab loogu talagalay shaashadda guriga ...
Si aad ugu raaxeysan karto tan codsiga bilaashka ah Iyo iyada oo aan lahayn xayeysiis ama iibsasho app ah, qalabkeenna waa in lagu maareeyaa Android 4.1 ama ka dib.
Buuga PocketBook ePup, PDF, Comics, Adobe DRM, AZW
Developer: AlBeydaa International SA
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » 10-ka barnaamij ee ugufiican ee lagu akhristo buugaagta kujira Android